बगाइएको कर्णाली | Nagarik News - Nepal Republic Media
यो छोटो जिन्दगीको,
लामो धागो र केही थान प्रहरका
कुरुस बोकेर काँपिरहेको मेरो कर्णालीलाई
स्विटर बुन्न भनी म कुनै बेला सहर पसेको हुँ !
यी सहरका रहरहरू
सायद देखेरै होला यो प्रहर पनि
घटघट–घटघट जहर पिउन तम्तयार छ ।
सातामा बदलिने नाताहरू
र, पैसामा साटिने बैंसहरू
ए सहर बताइदेऊ !
के मेरा कर्णालीका विकृतिभन्दा बढी
सभ्य देखिन्छन र ?
पाखा सर्दा छोरीले
छोएको नखाने बाबुलाई
अशिक्षित घोषणा गरिदियौं,
के आज समाजअगाडि देखाउन सक्छौं
कि आफ्नै छोरी बलात्कार गर्ने सहरिया बाउ
कतिको शिक्षित थियो भनेर ।
कर्णालीमा चरम भोकमरी छ भनेर
तर, कहिल्यै तिमीले खेल्यौ
मार्सी फल्ने खेतका रोपाइँमा
भुरल्ली कानमा राखी कोठीका खेलहरू !
र अवसर छैन भन्नेहरूले
रारातालमा पौडिरहेका चहकिला डलरहरूलाई !
कहिल्यै पुगेनन् उज्यालो मैनबत्ती बनेर
कर्णाली शिक्षित छैन भन्नेहरू !
फेरि कहिल्यै फर्केनन्
कर्णाली झुल्काउन भनेर
मिरमिरेमा सपना बोकाएर
सहर पठाएका सूर्यहरू !
आज म एक अञ्जुलीभरि
अबेरसम्म सुमसुमाइरहेछु !
कर्णाली स्वतन्त्र बग्न पाएकै रहेन छ !
यहाँ विभिन्न शीर्षकमा
बगाइएको छ मेरो कर्णालीलाई !
प्रकाशित: ११ श्रावण २०७६ ११:५२ शनिबार